Yenza-ngokwakho isiKhokelo kwi-infographics | Martech Zone
NgoLwesine, uJuni 30, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Ndiyayazi into ocinga… enye Ulwazi ngabantu? Yima… Ndiyazi ukuba bendikwisiqulatho samva nje sipapasha yonke intengiso ye-infographic endinokuyifumana kwi-Intanethi, kodwa le ilungile kakhulu. Ukuba uyazibuza ukuba kutheni le nto ukukhula kuqhubekile kwi-infographics, abantu baseVoltier Creative benze… uyifumene… i-infographic echaza kanye loo nto! Siphuhlisa i-infographics yabathengi bethu kwaye sicinga ukuba le yingcaciso egqibeleleyo!
Yenziwe nguVoltier Creative Intengiso ye-infographic
Kutheni le nto uVoltier enokuyenza le nto? Isitshixo kukuba i-infographic isetyenziswa njani. Ngaba uyalibona ikhonkco libuyela kwindawo yabo ethi Intengiso ye-infographic? Elo ligama eliphambili uVoltier angathanda ukubekwa kulo ... ukuze i-Infographic ipapashwe ukusuka kwisiza ukuya kwisiza, i-backlinks ipapashwa kwelo gama liphambili… oku kuya kuqhuba isikhundla sikaVoltier kulo naluphi na uphando lwelo gama lidibeneyo!
Liqhinga le-SEO elisebenza kakuhle! Ubuqhetseba kukwenza ukuba i-infographic ibaluleke, nangona kunjalo. Uphando kunye nophuhliso oluya kwi-infographics ludla ixesha kwaye luyabiza. Ukuba uza kwenza enye, kungcono uyenze ibalwe. Amaxabiso anokufikelela ngaphezulu kwe- $ 3k nge-infographic yomntu ophandwe kakuhle kwaye aphuhliswe kakuhle.
Ngaba imiba yeBenmarkmarks ibalulekile?
NgoJulayi 31, 2017 ngo-2:40 PM
Oku kucingelwa ukuba ngumzekelo omhle woyilo lwe-infographic? Kuyo yonke indawo LOL
Agasti 1, 2017 kwi-11: 16 AM
Ndicinga ukuba iphendula eyona mibuzo ixhaphakileyo. Ayisiso isitayile sam, kodwa ndisithandile.